Madaxweyne Geelle Oo Laalay Heshiiskii Dp World Iyo Imaaraadka Oo Djibouti Ugu Hanjabay Dacwad Caalami Ah
Saturday 24th February 2018 14:48:39 in Wararka by Xarunta Guud
Heshiiska ayaa ku saabsanaa in shirkadda Dubai DP World ay maamusho dekedda Dooraale ee dalka Djibouti, balse qoraalka khamiistii ka soo baxay Xafiiska madaxweynaha Djibouti ayaa lagu yidhi ”Jamhuuriyadda Djibouti waxay go’aansatay in ay joojiso sii wadidda hal dhinac oo saameyn degdeg ah ku leh qandaraaska la siiyay DP World”, iyadoo intaas raacisay "”si loo ilaaliyo qarannimada iyo madax-bannaanida dhaqaale ee Djibouti.”
Hase yeeshee shirkadda DP world ee ay iska leedahay dawladda Imaaraadka Carabtu ayaa sharci darro ku tilmaantay talaabada dawladda Djibouti"Waxaa aanu xukumada Jabuuti ku dhaleecaynayna talabada sharci darada ah Iyo hab-dhaqaanka islamakaana wada shaqayn naga dhaxayso oo 18 sanadood soo jireen ah. Faa’iidooyinka ay xukumada Jabuuti kaga faa’iiday dhaqalaha malayiinka dollar ee sii toos ah ama sii dadban ay ku heleen, taas oo dalka Jabuuti kaga faa’iiday fursado maalgelin ganacsi islamarkaana magac ku heshay mandaqaada Geeska Afrika. Dp World saami dhan 33%3 ayay ku leedahay dekadda Doraleh oo qaab dhismeedka awoodeed uu yahay 1.25 mn koontiineer (TEU’s).
DP world waxay intaas raacisay, "Waxaanu dawladda Djibouti ugu baaqaynaa inay joojiso talaabooyinkeeda xad gudubka sharci ah oo ay sii wado wada shaqaynta naga dhaxaysay 18-kii sannadood ee u dambeeyay.”
Khilaafkan ayaa la filayaa inuu saameeyo xidhiidhka diblomaasiyadeed ee labada wadan oo aan marka horeba lugo adag ku taagnayn.